လက်ထောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်မည်သို့ - ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်များငွေပေးချေမှု | USAHello | USAHello
လက်ထောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်မည်သို့ – ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်များငွေပေးချေမှု
အားလုံးအလုပ်အကိုင်များဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်လက်ထောက်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားဘာတွေလုပ်နေလဲအကြောင်းကိုအဖိုး. သင်တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးလက်ထောက်ဖြစ်လာမှယူလိုခြေလှမ်းများကိုလေ့လာပါ.
အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်စာသင်ခန်းများတွင်ဆရာ, ဆရာမများကြီးမားသောအတန်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းသားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာရုံကိုပေးစေခြင်းငှါမရရှိနိုင်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးရင်ဆိုင်ရ. လက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များဆုံးမဩဝါဒပေးစာသင်ခန်းထဲမှာအလွန်အရေးကြီးလှသည်. အချိန်အနည်းငယ်ကြာသောတာဝန်များကိုနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုကူညီခြင်းအားဖြင့်သင်ကြားရေးလက်ထောက်ဆရာ, ဆရာမဒါဟာထောက်ခံပါသည်.
ဒီ function ကိုအခြားအမည်များဖြစ်ပါသည်: တွဲဘက်ကျောင်းဆရာ, လက်ထောက်ဆရာနှင့် pareducator.
ကျောင်းထဲကနေလက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များဆုံးမဩဝါဒပေးမယ့်ကျောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်. တွဲဘက်မကြာခဏကျောင်းသားများတဦးတည်းအားဖြင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်စုငယ်များအတွက်ကူညီပေးသည်. တစ်ဦးသပ်ရပ်တန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား. function ကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသူဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ဆရာများအတွက်အချိန်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အလုပ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကသူတို့အလုပ်အတွက်ကျောင်းသားများကိုကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
မိတ္တူအလုပ်နှင့်အိမ်စာစုဆောင်း. လိုအပ်ချက်ရှိသည်သောသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်စာသင်ခန်းကနေကျောင်းသားများနှင့် Alhaflat.thouder Aldros.tnzim စာသင်ခန်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ Khash.okhz. သူတို့ Talib.mkablh မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များချိုးနဲ့နေ့လယ်စာစဉ်အတွင်း Atalib.alahrav ကျောင်းသားများကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်အနှစ်စဉ်ပညာရေးအစီအစဉ်အတွက် Msaadh.almsaadh ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်ကျောင်းသားများကို Watch
မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများနှင့်အလယ်တန်းအများပြည်သူအကျင့်ကိုကျင့်အတွက်အကူအညီများဆုံးမဩဝါဒပေး. သူတို့ကအစပုဂ္ဂလိကကျောင်းများအတွက်အလုပ်မလုပ်. သူတို့ကပုဂ္ဂလိကထိုကဲ့သို့သောအထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျောင်းများနှင့်အတူရှိသူများအဖြစ်ပညာရေးအဆောက်အဦ, သူငယ်တန်းနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာများ, ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ.
တစ်နှစ်လျှင်အကြား $ 19,000 မှ $ 23,640 ပျမ်းမျှဆုံးမဩဝါဒပေး Catching လက်ထောက်. မြင့်တက်ပေးဆောင် (Up ကိုမှ $ 30000) လူနေမှုစရိတ်မြင့်တက်ရှိရာဒေသများရှိ.
သင်တစ်ဦးဆရာဖြစ်လာချင်လျှင်သင်အနာဂတျမှာကလေးတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပျော်မွေ့လျှင်လက်ထောက်အလုပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးစုံလင်သည်. သငျသညျအထူးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူကလေးများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအစကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပါသည် (စိတ်ပိုင်းမသန်မစွမ်းကလေးများသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ). ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလက်ထောက်အလုပ်အကိုင်များဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အတွက်တန်ဖိုးရှိသောများမှာသစ်ကိုသင်တို့အားကျောင်းသားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြပါလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်.
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် Alsber.tabaah Alodah.allotf နှင့် Altvahm.akaddrh. ဆက်သွယ်ရေး Algid.mrn, ညှိနှိုင်း Tkev.tostagib ကျောင်းသားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်
သင်္ချာနှင့်ဘာသာစကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာ Altdras.mharrat ကျွမ်းကျင်မှု Alhacob.almharrat Altnzimih.mharrat ကောင်းသော. ပထမဦးဆုံးအကူညီပေးရေး.
သငျသညျရဆက်နွယ်မှုတစ်ဒီဂရီရရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် (နှစ်နှစ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး) ပညာရေး၌ဖြစ်စေကောလိပ်၏အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်အများဆုံးအများပြည်သူကျောင်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အသင်ကြားရေးလက်ထောက်ရဖို့.
တချို့ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့မဟုတ်လွတ်လပ်သောဆက်နွယ်မှု၏ဒီဂရီမလိုအပ်ပါဘူး. သို့သော်အချို့ပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အများအတွက်သင်ကြားရေးလက်ထောက်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်. သငျသညျအနာဂတျတှငျဆရာဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ့အပြင်, သင်သည်ဤရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်ရွှေ့ဖို့သင့်ရဲ့ပညာရေးကိုသုံးနိုင်သည်.
ကောလိပ်များ semi-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးအတွက်နှစ်နှစ်ဒီဂရီကျောင်းအပ်ပူဇော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာသို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာအကူအညီကိုကူညီ. သငျသညျကွန်မြူနတီကောလိပ်တွင်ဤဒီဂရီတစ်ဦးရရှိရန်လေ့လာလို့ရပါတယ်. သင်တစ်နေ့တာအတွင်းအလုပ်လုပ်လျှင်သင်သည်ဤအဆင့်အချို့များအတွက်အွန်လိုင်းလေ့လာလို့ရပါတယ်.
အနီးအနားအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ရှာရန်သငျသညျ – link ကိုမှ https://www.careeronestop.org/LocalHelp/CommunityServices/find-community-colleges.aspx؟newsearch=true
အွန်လိုင်းတွဲဘက်ဘွဲ့ Learn – link ကိုမှ https://www.teachercertificationdegrees.com/degrees/associates-degree/
လက်ထောက်သင်ကြားရေးအဖြစ်လက်မှတ်ရရှိရန်, သင်နှစ်နှစ်ကောလိပ်တစ်ခုလက်မှတ်ရရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်တို့သည်လည်းလေ့ကျင့်ရေးပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်ခွဲခြာစာသင်၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်မည်ဟုဆိုလိုသည်. ပြည်နယ်အများစုတွင်လည်း ParaPro ၏အကဲဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့လက်မှတ်လိုအပ်.
သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက် ParaPro လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာပါ – link ကိုမှ https://www.ets.org/parapro/state_requirements
သငျသညျကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်မှာနေတုန်းပဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်, လက်ထောက်ဆရာအဖြစ်အလုပ်သင်များအတွက်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည်. ဤသည်နောက်ပိုင်းတွင်သင်အချိန်ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျလက်ထောက်ဆုံးမဩဝါဒပေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ထရိန်နင်အဖြစ်ခြောက်လသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံ၏တစ်နှစ်ဖို့လိုပမေ.
သင်နှင့်အတူစတင်အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာမလိုအပ်?خذ دورة GED® المجانية عبر الإنترنت. ဆိုက်ကို Schoolspring.com ဒါဟာပညာရေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဘို့ site တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အကြောင်းကို Read သည်အခြားအလုပ်အကိုင်များပညာရေး. အလားတူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြောင်းကို Read